mysansar – Page6– MySansar
बिहीबार सोसल मिडियामा एउटा फोटो निकै भाइरल भयो। रामपुर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकायका एक प्राध्यापकलाई विद्यार्थीले ३० दिनमा सकाउनुपर्ने कोर्ष ४ दिनमा हचुवाको भरमा पढाएर सिद्दाएको आरोप लगाउँदै कालो मोसो दले र जुत्ताको माला लगाइदिए। यो घटनाले पुरानो कुरा सम्झाइदिएको भन्दै राम लोहनीले राखेको फेसबुक स्टायटस- झन्डै पन्ध्र वर्षअघिको कुरा। भाषाविज्ञान विभागमा… Continue reading
-आशिष शर्मा- मैले ५ फेब्रुअरी मा अनलाइन सपिङ साइट दराजबाट एउटा सामान किनेको थिएँ। सामानको मोल डेलिभरीसहित जम्मा रु. १ सय ९९ थियो। सामान डिफेक्टिभ भएकोले नियम अनुसार किनेको ७ दिनभित्र मैले त्यो सामान फिर्ता गरिदिएँ। मलाई दराजले रु १ सय ९९ को भौचर इमेलमा पठायो। ल ठीकै छ नि त यो भौचर त रकम… Continue reading
-क्षितिजराज लोहनी- ‘अमेरिकाको जीवन साह्रै कष्टकर, हप्ताको ६ दिन घोटीएर काम अनि बाँकी एक दिन लुगा धुनमै सकिने । नेपालीहरू तल्लो स्तर को काम पाउँछन् । महिनाको कमाइ भाडा तिर्नै ठिक्क । सधैँ अभावमा बस्छन् नेपाली ।’ अमेरिका आएका नेपालीका बारेमा नेपालीले नै गर्ने औसत टिप्पणी हुन् यी । म अमेरिका आएको ९ वर्षमा हरेक… Continue reading
स्पेनको नेपाली दूतावासको केटाकेटी कुटनीति
Posted on February 7, 2019 by mysansar
-सन्तोष न्यौपाने/बेल्जियम- लामो प्रयासपछि युरोपियन देश स्पेनमा नेपाली दुतावासको स्थापना भयो। दुतावास खडा गर्न त्यहाँका नेपालीहरुले वर्षौ संघर्ष गरे। प्रत्येक परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो। अन्ततः संघर्ष पछिको सफलता स्पेनका नेपालीहरुले प्राप्त गरे। तर अहिले कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झैँ भएको छ। दुतावास स्थापनापछि राप्रपा कोटाबाट भरतबहादुर रायमाझी नियुक्ति भए। तर नियुक्ति पछि… Continue reading
-सन्तोष न्यौपाने, बेल्जियम- केही समय अगाडि तमु समाज बेल्जियमले ल्होसारको अवसर पारेर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो जसको नारा थियो “शास्त्र हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए परम्परा हराउँछ,परम्परा हराए मान्छे(जाती)हराउँछ । तर विडम्बना यो नारामा भनेजस्तै कार्यक्रममा आएका कलाकार नै हराएका छन् । अर्थात् कार्यक्रम पछि उनीहरू नेपाल नफर्की अर्कै देशमा युरोपमा बस्ने कागजात बनाउन पुगेका… Continue reading
-रामचन्द्र भट्ट- केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा एउटा छाप थियो–’डलर त अमेरिकामा कति कमाइन्छ, कति। रुखमा टिपे जसरी डलर टिप्न पाइन्छ होला त्यहाँ छ।’ अहिले यो छाप अलिकति फेरिएको छ। अहिले चाँही अमेरिकामा आइफोनको रुख हुन्छ। अनि आइफोन बोटमा टिप्न पाइन्छ। म जुन ठाउँमा बस्छु (सिलिकन भ्याली) मै छ आइफोनको मुख्यालय। भ्यालीका विभिन्न काउन्टीमध्य कुपरटिनोमा छ… Continue reading
फिल्मी पत्रकारहरुको एक खेमा अहिले आन्दोलनमा छन्। उनीहरु चेतावनी दिइरहेका छन्- हामी फलानो हलमा गरिने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनौँ। चलचित्र पत्रकार संघ, नेपालको लेटरप्याडमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक भयो। जसमा भनिएको छ- ‘हलका कर्मचारीले उनीमाथि हातपात गर्नु समाचार सम्प्रेषणमा अवरोध साथै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। हलका कर्मचारीको यस्तो ज्यादतीप्रति संघ घोर निन्दासहित… Continue reading
– विश्व पौडेल – हामीले जस्तो फ्री विज्ञापन पाउने कुन शहर होला? गएको केही वर्षदेखि लोन्ली प्लानेट लगायत धेरै ट्राभल गाइडहरु, वेबसाइटहरुले हाम्रो मुलुकलाई घुम्नै पर्ने लिस्टमा राखेको राख्यैछन्। भर्खरै पनि सिएनएनमा लोन्ली प्लानेटको सन् २०१९ को घुम्नुपर्ने सहरको सूचीमा नेपालको काठमाडौँ पाँचौमा भएको खबर आयो। यति धेरै फ्री विज्ञापन त कमै देशले पाउँछन् होला।
-सरोज भुसाल- सामान्यतया एक जना मान्छे तब मात्र सफल भएको महशुस हुन्छ जब उसले कमाएको पैसाले काम गरेर पैसा कमाउन थाल्छ। यस्को पनि एउटा प्रक्रिया हुँदो रहेछ। एउटा कामदार (employee)परिश्रम गरेर पैसा जम्मा गर्छ, त्यो पैसा लगानी गरेर एउटा उधोग वा ब्यवसाय गर्छ त्यसमा पनि आफै खटेर काम गर्छ (self employee) स्वरोजगार हुन्छ। एवं रितले… Continue reading
-राजु अधिकारी- नेपाल विकसित र सम्बृद्ध नभए सम्म हेर्न नजाने प्रण गरेर बसेका जननेता मदन भण्डारी आफ्नो देहावसान भएको पच्चीस वर्ष पछि अब त अवश्य पनि नेपाल विकसित भयो होला भनेर एक दिन आफूले कल्पना गरेको सुन्दर शान्त अनि विकसित नेपालको यात्रा गर्न निस्केछन्। आफूले देखेको सपना अनुसार पच्चीस वर्षमा त नेपाल संसारकै समृद्ध राष्ट्र… Continue reading
-आर. क्षेत्री- नेपालको संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउन सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ र यसमा दफावार छलफल भइसकेको छ। विधेयक पारित भएपछि कानुन बनेर लागू हुन्छ। तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेको चाहीँ अझै बुझ्न सकिनँ मैले। खासमा त्यसलाई आइ.डी.… Continue reading
-रविन्द्र प्याकुरेल- सिस्नुपानी नेपाल नामको एउटा संस्थाले देउसी भैलोलाई एक्सटेन्डेड भर्सन अफ गाईजात्रा बनाएको धेरै भइसक्यो। बरु यसपालि गाईजात्रा प्रज्ञा भवनमा भएको थिएन, सिस्नुपानी देउसी चाहिँ भयो। अचम्म के छ भने यो गाईजात्रा पाराको व्यङ्ग्यात्मक देउसी हेर्न सबै विशिष्ट उपस्थित हुन्छन्। यसपालि प्रधानमन्त्री बिरामी भएर मात्रै उपस्थित हुन सकेनन्। नभए सबका सब भिआइपी अरु काम… Continue reading
गुगलको लोगो भएको लुगा लगाएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टी नयाँ शक्ति नेपालको काठमाडौँमा भएको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रतिवेदनमा’समसामयिक राजनीति र नेकपाको सरकारको समीक्षा’ उपशीर्षकमा वर्तमान नेकपा सरकारप्रति कडा प्रहार गरिएको छ। नेकपासँगै पार्टी एकीकरण हुन लागेको भए पनि चुनावको सिटको विषयमा कुरा नमिलेपछि एकता भाँडिएको थियो। पढ्नुस्… Continue reading
– सुमन रन्जित – तपाईँहरुमध्ये धेरैले एक वर्षअघि अमेरिकामा एक नेपालीलाई यौन दुर्व्यवहारको केस लागेको समाचार पढ्नुभएको होला। अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा तेक्वान्दो प्रशिक्षण दिइरहेका शुद्धोदन रन्जित मेरा मामा हुन्। प्रशिक्षण लिने तीन छात्रालाई अनुचित छोएको आरोप लागेपछि यौन दुर्व्यवहारको केसमा ५१ वर्षीय रन्जितविरुद्ध वासिङटन काउन्टीमा मुद्दा चलेको थियो। यो समाचार नेपालका अधिकांश मिडियाले लेखेका थिए।… Continue reading
-पुण्यप्रसाद धमला- मलाई पछिल्लो घटनाक्रम र परिस्थितिले आजभन्दा ७ वर्ष अघिको त्यो दिन स्मरण गराएको छ। २०६८ असोज १९ गते, विजया दशमीको टीकाको दिन। यही दिन हो जतिबेला मैले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवसँग दशैको टीका ग्रहण गरेको थिएँ। सञ्चार कर्ममा लागेको मान्छे, चाहेर पनि सबै चाडपर्व हाम्रा लागि रहर मात्रै बन्दैनन्,… Continue reading